भारतीय नागरिकलाई वं’शजको नागरिकता – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारभारतीय नागरिकलाई वं’शजको नागरिकता
भारतीय नागरिकलाई वं’शजको नागरिकता
दाङ– गलत विवरण पेश गरेर दाङमा एकजना भारतीय नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट वं’शजको नागरिकता प्राप्त गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नागरिकता लिएको वर्षपछि रहस्य खुलेको हो । नेपाली नागरिकता लिने भारतको उत्तरप्रदेश बलरामपुर जिल्ला श्रीदत्तगञ्ज उत्रौला घर भएका २५ वर्षीय विशाल गुप्ता पटवाल अहिले पू’र्पक्षको लागी का’रागार च’लान भएका छन् । ०७७ जेठ १३ गते उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।असार ८ गते गुप्तालाई जिल्ला अदालतले पू’र्पक्षको लागी का’रागार च’लाउन गरेको छ ।
भारतीय ना’गरिक गुप्ताले मितबहादुर दमाइको नामबाट ०७५ मंसिर २५ गते ५२–०१–०७५–०४०५२ वं’शजको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । उनले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ वर्गदा निवासी हिरालाल दमाइको छोरा बनेर नागरिकता लिएको पाईएको छ ।गुप्ताबाट भारतीय विशिष्ट प’हचान प्राधिकणले जा’री गरेको कार्ड समेत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिए । द’माइका जेठा छोरा हि’रालाल भारतमा काम गर्न गएका छन् । तर, हि’रालालले गुप्तालाई आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिलाएका थिए ।
प्रहरीले हि’रालाल द’माई सहित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं। ३ का वडा अध्यक्ष माधव चौधरी, वडासचिव पद्मप्रसाद रेग्मी, कर्मचारी त्रिपुरा खड्का र सामाजिक परिचालक लिला अधिकारीवि’रुद्ध मु’द्दा गरेको छ । नागरिकता लिने विशाल गुप्ता बाहेक अन्य पाँचै जना फ’रारको सूचीमा छन् । आरोपित विशालले आफु भारतीय ना’गरिक भएको र गलत विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको प्रहरी स’मक्ष व’यान दिएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को सि’फारिसको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ बाट ब’साईसराईको विवरण पेश गरेर सि’फारिस बनाएका थिए ।
घो’राहीमा मजदुरी गर्दै आएका बिशालले चार वर्षअघि सम्झना नेपालीसँग विहे गरेका थिए ।बिहेपछि एउटा बच्चा ज’न्मियो । अननि बच्चाको ज’न्मदर्ता गराउन र आफ्नो विहे द’र्ता गराउन खो’ज्दा नभएपछी सम्झनाले मित मामा नाता पर्ने हि’रालाल नेपालीलाई जसरी पनि नागरिकता बनाइदिन अ’नुरोध गरिन् । अनी हि’रालालले आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिलाइदिए ।